ဤမေးလ်ကိုသင်ဖွင့်ကောင်းဖွင့်နိုင်သည် Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, မေလ 15, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒီနေ့ငါ့စာထဲမှာငါရှေ့မျက်နှာမှာသေသပ်စွာပုံနှိပ်ထားတဲ့နာမည်အပြာရောင်စာအိတ်တစ်လုံးရခဲ့တယ်။ ပြန်ကြားချက်သည်စာတိုက်ပုံးတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်လက်ရေးဖြင့်ရေးသားနေဆဲဖြစ်သည်။ စာအိတ်ကိုကျွန်တော်လှန်လိုက်တဲ့အခါအဲဒါမှာ Hallmark တံဆိပ်တုံးရှိတယ်။ သိချင်စိတ်ကကျွန်တော့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လို့အောက်ဖော်ပြပါသတင်းစကားပါသောကဒ်ပြားကိုရှာရန်ကျွန်ုပ်ဖွင့်လိုက်သည်။
ဒါကလက်ရေးဖောင့်နည်းပညာဖြစ်ပြီးအဲဒါကိုတကယ်ထိမိတယ် တိုက်ရိုက် စာပို့ နှစ်ပေါင်း၏နောက်ဆုံးစုံတွဲမြင်ကွင်း။ တိုက်ရိုက်စျေးကွက်သမားများကသင့်ကိုသူတို့ကစာတစ်စောင်ကိုဖွင့်လိုက်ရင်စာကိုဖတ်ဖို့ပိုသင့်တော်ကြောင်းသိကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အပိုင်းအစကိုဖတ်လျှင်၊ သင်ဖုန်းခေါ်ရန် ပို၍ သင့်တော်ပါသည် သင်ဖုန်းခေါ်ပါကသင်ဝယ်ကောင်းဝယ်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာအားလုံးသော်လည်း, ပွင့်လင်းနှင့်အတူစတင်!
ဤဖောင့်ကိုယုံကြည်ရလွယ်ကူရခြင်း၏အကြောင်းပြချက်မှာစာလုံးအရွယ်အစားတူသော ('e's speed in check') နှင့်အကွာအဝေးအကွာအဝေးကိုမည်သို့ကွဲပြားသည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ kerning နှင့် ခြေရာခံခြင်း) ။ ဒီနည်းစနစ်ကမင်းရဲ့အာရုံကိုဖမ်းယူနိုင်မှာပါ။ သာမန်အမျိုးအစားနဲ့ကွဲပြားခြားနားတာကသင့်ကိုလက်ဖြင့်ရေးရန်စဉ်းစားရန်လှည့်စားသည်။
ထိုသို့မဟုတ်ကြောင်းကိုပြောရန်လွယ်ကူသည့်နည်းတစ်နည်းမှာအမှန်တကယ်လိုင်းများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားအလွန်တိကျမှန်ကန်စွာကွာခြားသည်။ ဤပရိယာယ်များကိုလည်းနောင်တွင်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရလျှင်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအလုပ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အလားအလာများစွာကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ငါမကြာခင်ရွေ့လျားစေခြင်းငှါကတည်းကငါစိတ်ဝင်စားမဟုတ်ပါဘူး။
Tags: အာရုံစူးစိုက်မှုမြေပုံမင်္ဂလာပါfacebook edgerank ပါမြေကြီးဆင်းသက်စာမျက်နှာဒီဇိုင်းmultivariate စမ်းသပ်ခြင်းသဘာဝဘာသာစကားအပြောင်းအလဲနဲ့pdfpdf စီမံခန့်ခွဲမှုTom Foremski
Web Analytics မှမြှင့်တင်ရန်
မေလ 15, 2008 မှာ 10: 09 pm တွင်
စားသုံးသူများက ဒါကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး လျစ်လျူရှုလာသည်အထိ စောင့်ပါ။ နောက်တစ်ဆင့်မှာ အိန္ဒိယရှိ စာရေးဆရာများထံသို့ ကုမ္ပဏီများထံမှ အရင်းအမြစ်ကို ထုတ်ယူရန် ဖြစ်သည်။ သင်၏တိုက်ရိုက်မေးလ်သည် အမှန်တကယ်လက်ဖြင့်ရေးသားမည်ဖြစ်သည်။ အရာတွေ အပြည့်ရောက်လာတယ်။ ခဏစောင့်ပါ။
မေလ 16, 2008 မှာ 6: 17 AM
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက snail-mail ကနေတဆင့် 'လက်ရေးနဲ့ရေးတဲ့' တစ်ခုခုကို ငါရရှိတာ အလွန်နည်းပါးတဲ့အတွက် မင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်က တိကျနိုင်ပါတယ်။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲစီးပွားရေးနှင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာစျေးကျဆင်းမှုနှင့်အတူ အိန္ဒိယသို့ ပြင်ပအရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်းအတွက် အိန္ဒိယသည် အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယလူမျိုးအများအပြား (အမေရိကန်တွင် အကြိမ်များစွာ ပညာတတ်များ) ဖြစ်သောကြောင့် အိန္ဒိယသို့ ပြင်ပအရင်းအမြစ်ရှာဖွေရန် ပိုစျေးကြီးလာသည်။ အိန္ဒိယသည် သူ့ဘာသာသူ ကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာ ဒီ outsourcing အတွက် မှန်ကန်တဲ့ အလားအလာဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်တော် မသေချာပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် တခြား ဝင်ငွေနည်းတဲ့ နိုင်ငံတချို့က အဲဒီဖြေရှင်းချက်မျိုးနဲ့ စားပွဲကို ရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ သံသယမရှိပါဘူး။
မေလ 16, 2008 မှာ 6: 49 AM
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော် U-verse ဖိတ်စာအတွက် သုံးလလောက် စောင့်ခဲ့ပြီး မင်းက ငါ့ရှေ့မှာ ရခဲ့ပြီး အဲဒါကို မလိုချင်ဘူး။ တရားမျှတမှု ဘယ်မှာလဲ! အရမ်းရယ်ရတယ်။
မေလ 16, 2008 မှာ 7: 17 AM
ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းတစ်ဦးသည် U-verse တွင်အလုပ်လုပ်ပြီး bandwidth နှင့် routing equipment မှအကွာအဝေးကြောင့် ၎င်းသည် အလွန်တိကျသောအိမ်ထောင်စုပစ်မှတ်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ မင်းဘေးအိမ်က အိမ်နီးချင်းမှာ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမယ့် မင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ သူက အတိအကျပြောခဲ့တယ်။ ရပ်ကွက်အဆင့်အထိ အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ဖြတ်ကျော်လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ငါ အခုနေနေတဲ့ တိုက်ခန်းမှာ နေနေတာ ဖြစ်နိုင်တယ် - သိပ်သည်းဆ မြင့်တယ်။
မေလ 16, 2008 မှာ 7: 51 AM
ဒါဆို ဒီဖောင့်ကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးကို စဉ်းစားပြီးပြီ...
(ဟုတ်ပါတယ်၊ ပုံမှန်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှုပါ။)
မေလ 16, 2008 မှာ 10: 39 AM
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် လောင်းကစားသမားဖြစ်ခဲ့ပါက ကျွန်ုပ်သည် ပြင်ပနေရာအဖြစ် ဖိလစ်ပိုင်တွင် $10 ရှိမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ စာအိတ်ဖွင့်ထားသည်ကို ထောက်လှမ်းရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် ခြေရာခံကိရိယာများအတွက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို အမျိုးသား သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးက ဖွင့်ပါက၊ လူ၏အသက်နှင့် အမှိုက်ပုံးကို မည်မျှကြာကြာမဖယ်ရှားမီတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
မေလ 16, 2008 မှာ 10: 55 AM
အဲဒါကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ မြင်နေချိန်မှာတော့ အဲဒါကို ရူးသွပ်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ လူတွေကို အာရုံစိုက်လာအောင် လှည့်စားတဲ့ နည်းစနစ်တွေဟာ ငါစိတ်ဝင်စားတဲ့ နည်းစနစ်တွေ မဟုတ်ဘူး။ ရေတိုမှာ ထိရောက်မှုရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် လူတွေက ကျွန်မရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ ကမ်းလှမ်းတဲ့အရာတွေကို အာရုံစိုက်စေချင်ပါတယ်၊ လူတစ်ချို့က ကျွန်မလက်ရေးနဲ့ရေးထားတဲ့ မှတ်စုကို သူတို့ဆီ ပို့လိုက်တာလို့ တွေးပြီး ရူးသွပ်သွားတာကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ JWTCW
မေလ 16, 2008 မှာ 12: 05 pm တွင်
အဲဒါက စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုလို့ ဘယ်မှာပြောခဲ့တာလည်းဆိုတာ မသေချာပါဘူး။ ငါ မင်းကို သဘောမတူပါဘူး၊ ငါဟာ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ မှတ်ချက်ပေးခဲ့တာတောင် ချီးကျူးမိပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ငါသည် အရူးပဲ။.